အမေးအဖြေများ - Bhmed
အဘယ်ကြောင့် Bhmed ထုတ်ကုန်ကိုရှေးခယျြ?
Bhmed စစ်မှန်ဆွစ်ဇာလန် Anti-အိုမင်းပုံသေနည်း Anti-အိုမင်း, ကျန်းမာရေးပွနျလညျနှင့်စုစုပေါင်းကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းများအတွက်ချောမွေ့စွာဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ FFVC နှင့် NanoVital ဆဲလ် Extractive ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားကောင်းလာစေပြီးဇီဝဟန်ချက် restore ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လတ်ဆတ်သောအမာရွတ်များ, အပူလောင်, keloids, hyperpigmentation, အသက်အစက်အပြောက်များနှင့်အခြားပြဿနာအသားအရေအခြေအနေများကုသထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။
ဘယ်လိုထုတ်ကုန်သည်အခြားဆဲလ်ကုထုံးထုတ်ကုန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသော Bhmed နေကြသနည်း
အဆိုပါဆဲလ်အမြှေးပါးများနှင့်နျူကလိယထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ထိုကွောငျ့, မတည့်တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချနှင့် DNA ကို / RNA လွှဲပြောင်းမပေးပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်ထုတ်ကုန် Bhmed ပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ GMP ညွှန်ကြားချက် 2001 / 83 / EC များနှင့်အလှကုန် GMP က ISO 22716 နှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို protocols များနှင့်အတူလိုက်လျောသည့် HACCP (Hazard အားသုံးသပ်ခြင်းဝေဖန်ထိန်းချုပ်ရေးပွိုင့်) နဲ့အညီ၌ရှိကြ၏။
အဘယ်ကြောင့်ထိရောက်သောနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံထုတ်ကုန် Bhmed နေကြသနည်း
စီးပွားဖြစ်အအေးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် ultrafiltration ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမြင့်ဆုံးဆယ်လူလာ bioavailability ရှိအာမခံပါသည်။ မြင့်မားသောဒြပ်ထုမော်လီကျူး 10k Dalton ထက်လျော့နည်းတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်တဲ့ဒြပ်ထုမှပြိုပျက်နေကြသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လတ်ဆတ်နှင့်အအေးခန်းဆဲလ်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူမျိုးစုံခြေလှမ်းများကတဆင့် ultrafiltrated နေကြသည်။ ကြောင့်သေးငယ်တဲ့ဒြပ်ထုငှါ, ဆဲလ်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူကိုအလိုအလျောက်မဆိုအညစ်အကြေး, ဘက်တီးရီးယားဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်၏မြုံ, ပျက်ပြယ်ဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်း bioactive ပါသလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သူတို့အပူမဆိုပုံစံများမပါဘဲထုတ်လုပ်နေကြပြီး, ဆိုလိုတာကအအေး-လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြသည်။ အာဟာရနှင့်အင်ဇိုင်းတွေသာလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းရှင်သန်, ဒါပေမယ့်လည်း Anti-inflammatory မော်လီကျူး, hyaluronic acid ကို, ကော်လာဂျင်, elastin, antioxidants, lipids, အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဖြစ် peptides ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားကြသည်။
တိရစ္ဆာန်များလူသားဆင်တူသည်။ တစ်ဦးကလူ့ဆဲလ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို 200 မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 220 ရှိပါတယ်, ဒါတိရစ္ဆာန်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းအမျိုးအစားလူ့များအတွက်အဖြစ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်တူညီသောလမ်းလည်ပတ်သော။
cell ထုတ်ယူခြင်းတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးကြီးကြပ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်သင်ကြား်ထမ်းများကအထဲကယူသွားတတ်၏။ အေးကွင်းဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာချုပ်ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ ultramodern cleanroom အတွက်ချက်ချင်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတူ On-site ကိုပြင်ဆင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်လျှောက်လုံးထိန်းသိမ်းထားသည်။ သွေးစွန်းတဲ့သားသတ်သမားအီးယူလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် (Tse / BSE ပြဋ္ဌာန်းအပါအဝင်) ဂျာမန်အာဏာပိုင်များကထိန်းချုပ်ထား။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အသီးအသီးအချောထုတ်ကုန်ဖို့ကုန်ကြမ်းကနေ traceable ကြောင်းဆိုလိုသည်။ သူတို့ကဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏အရည်အသွေးကိုစိတ်ချသည်။
အသက်အရွယ်ရအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်တဖြည်းဖြည်းအပြောင်းအလဲများမှတဆင့်တတ်၏။ ဤရွေ့ကားအိုမင်း, အမာရွတ်များ, အညစ်အကြေး, အစက်အပြောက်, အရေပြားနှင့်အရေးအကြောင်းတွေ sagging ပါဝင်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သစ်တွေနဲ့အတူဆဲလ်အသေကိုအစားထိုးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ cell ကုထုံးပျက်စီးဆဲလ်အစားထိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့လူ့သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ဆဲလ်မိတ်ဆက်။
cell ကုထုံး, အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးအသားအရေနှင့်အသားအရေလန်း, စွမ်းအင်အဆင့်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်, ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်တစ်သျှူးပြုပြင် accelerates ။
ဘယ်လိုဆဲလ်ကုထုံးကို stem cell ကုထုံးအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပါသလဲ
ပင်စည်ဆဲလ်ကုထုံးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဆဲလ်တွေ undifferentiated, များသောအားဖြင့်သန္ဓေသားဆဲလ်တွေဖြစ်ကြသော်လည်း cell ကုထုံး, ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတိကျတဲ့ဆဲလ်တွေ (ဥပမာအသည်းဆဲလ်တွေ, ကျောက်ကပ်ဆဲလ်) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
ဆဲလ်ကုထုံး၏အခြေခံပင်မနိယာမဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 1970 ရဲ့, Heidelberg, DRs တက္ကသိုလ်၌တည်၏။ အိပ်ချ် Lettre နှင့်အက်ဖ် Schmidt ကအသည်းမှအသည်း, နှလုံးဆိုလိုသည်မှာနှလုံး, လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုပစ်မှတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖွင့်အဆုံးသတ်သန္ဓေသားဆဲလ်တွေထိုးသွင်းကြောင်း, marking ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်းနှင့်ဆဲလ်၏သဲလွန်စအသုံးပြုပုံသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာမှတ်တိုင်သုတေသနကြောင်းတိရိစ္ဆာန်ဆယ်လူလာပစ္စည်းအမှန်ပင်ရှိသော counterpart ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်တစ်ရှူးမှလူ့အိမ်ရှင်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်သက်သေပြဖို့အများကြီးကိုပြု၏။
အဘယ်ကြောင့်ပရီမီယံ Extract ကိုရှေးခယျြ?
Bhmed အရေးပါသောဆဲလ်ပရီမီယံ Extract softgels ကမ္ဘာ့သာ Neutraceutical Anti-အိုမင်းဖြည့်စွက်သည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ bioactivity သေချာစေရန်အလားတူထုတ်ကုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိမှာအအေး-လုပ်ငန်းများ၌သိုးချင်းပါရှိသည်။ ကျနော်တို့သုံးကြောင်းသိုးချင်းထောက်ပံ့ရေးကိုက်ညီမှုသော့ချက်ရှိရာတစ်ဦးမူလအစ-controlled ကိုလိုနီများထံမှဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးသာပါဝင်ပစ္စည်းများပြည့်စုံကျန်းမာနဲ့ anti-အိုမင်းအထုပ်အောင်မြင်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ အားလုံးတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများမော်လီကျူး compressed နှင့် BSiDB ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သိပ္ပံပညာရှင်များကတီထွင်တဲ့စီးပွားဖြစ် blending ဇီဝနည်းပညာဖြင့်မံနေကြသည်။ အားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်ဆွစ်ဇာလန်ဖို့ကုန်ကြမ်းကနေ traceability ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ချောထုတ်ကုန်ရေးဆွဲပြီး။
ဘယ်လိုဆန့်ကျင်အိုမင်း & whitening အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလဲ?
ဒါဟာရေးဆွဲရေးအရေးပါသောအအအေးမိ-လုပ်ငန်းများ၌အင်ဇိုင်းတွေ, Anti-၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများ, ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဆဲလ်တွေတိုးမြှင့်ဖို့ကန့်သတ်အပါအဝင်သော်လည်းမကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအဓိကအကြောင်းရင်းများကိုပစ်မှတ်ထားနေဖြင့်တစ်ဦးခြုံငုံကျန်းမာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များကဒီဇိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်များတွင်အဓိကအားအစားအစာချက်ပြုတ်နေသည်နှင့်အမျှဤမရှိမဖြစ်အာဟာရဓာတ်အများအပြားအပူ၏သင်တန်းအတွက်ဖျက်ဆီးတတ်၏။ အရေးပါသောအဆဲလ် Softgels အများဆုံးစုပ်ယူဘို့ nano မှုန်ထဲသို့ပါဝင်ပစ္စည်းများပြန်ဆိုခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်စီးပွားဖြစ် BSiDB ဇီဝ blending sequence ကိုတဆင့် blended ရာ ultrafiltration အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကာအဆင့်မြင့် enzymatic အစာခြေ, မှတစ်ဆင့်လုပ်ငန်းများ၌အအေးကနေတဆင့်လုံးဝထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ6bioactive ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏, ထို 500mg ချင်း, MG မှ mg, ဈေးကွက်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုရှိတယ်။ ဒါဟာအဲဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်များ anti-အိုမင်းသက်ရောက်မှုများကိုအင်ဇိုင်းတွေ, ကြီးထွားမှုအချက်များ / ဗီတာမင်, သတ္တုဓာတ်, Anti-၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများ, ကိုယ်ခံစွမ်းအား-globulins နှင့်စသည်တို့ကို၏ 128 အမျိုးမျိုးထက် ပို. ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Krill ရေနံ (100mg) အခြား Anti-အိုမင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဆေးခန်းသက်သေပြပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အစောပိုင်း 8 ရက်သတ္တပတ်အဖြစ်အရေးအကြောင်းတွေပျောက်လျော့ပေးနိုင်သည်။ သဘာဝ Whiten အကျိုးသက်ရောက်မှု hydroxytyrosol ရှိပါတယ်ရသောသံလွင်ပိုလီဖီနော, Glutathione တစ်ဦး Pre-cursor တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပိုလီဖီနောနည်းလမ်းအရေပြားပေါ့စေရန်ကူညီပေးသည်ရာ glutathione ထုတ်လုပ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
ဒါဟာဆဲလ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး, သိမြင်မှုတိုးတက်မှု, အရေပြားအသားအရေလြော့ပေါ့, လက်သည်းသက်တမ်းတိုး, ဆယ်လူလာ DNA ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ဒါဟာအစနှလုံးသွေးကြောစနစ်, မျက်စိ, အရိုးနှင့်သွားများကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်ပူးတွဲကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အများအားဖြင့်တစ်ဦး3လသင်တန်းအတွင်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းထိုကြောင့်ထိုမှန်မှန်ကန်ကန်အကဲဖြတ်ဖို့သမ္မာသတိရှိသောဖြစ်ပါသည်, ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကပြောသည်ခံရကြောင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်, တစ်ဦးအဖြစ်အစောပိုင်းစားသုံးမှုတစ်လအဖြစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့တိုင်, ငါတို့3လအတွင်းထောက်ပံ့ရေးတစ်နိမ့်ဆုံးတိုက်တွန်းပါသည်။
အာဟာရကြွယ်ဝချင်း, ဖွံ့ဖြိုးဆဲသန္ဓေသားမှမိခင်ထံမှအရေးပါသောအအာဟာရသယ်ဆောင်။ သိုးများကိုအချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့လူ့အချင်းရန်၎င်း၏တူ၏အခြားသူများထက်ပိုပြီးကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။
ဘယ်အရပ်ကအရင်းအမြစ်က၎င်း၏သိုးချင်း Bhmed သနည်း?
အဆိုပါ NanoVital ဆဲလ် Extractive အတွင်းရှိပါဝင်ပစ္စည်းများဘာတွေလဲ?
nano အရေးပါသောဆဲလ် Extractive bioactive တစ်ရှူးများထံမှ 10% တက်ကြွစွာဆဲလ်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူထံမှလုပ်နေကြသည်။ ဇီဝ peptides အဖြစ်လူသိများတက်ကြွစွာဒြပ်ပေါင်းများ, တစ်သျှူးဒါမှမဟုတ်အီးယူ-လက်မှတ်တံခါးပိတ်ကိုလိုနီများထံမှဝယ်ယူယုန်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကနေဆင်းသက်လာဆဲလ်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ၏ nanofiltration မှတဆင့်ရယူနေကြသည်။
ဘယ်လို NanoVital ဆဲလ် Extractive အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုမြောက်မြားစွာယန္တရားပေမယ့်အများကြီးလိုအပ်အခြေခံဆယ်လူလာ organelle အစိတ်အပိုင်းများ, အလွှာများနှင့်အင်ဇိုင်းတွေနှင့်အတူဆဲလ်များကိုနိုင်ဖြစ်ခြင်းအသုံးအများဆုံးသူတွေကိုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအစိတ်အပိုင်းများကိုသာဆယ်လူလာကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ၏တိကျသော type ကိုမှကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်, ဆိုလိုတာကကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်။
NanoVital ဆဲလ် Extractive အားလုံးကိုအကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?
NanoVital ဆဲလ် Extractive တိကျတဲ့ Nano-peptides, အလွှာများနှင့်အင်ဇိုင်းတွေနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကိုယျခန်ဓာ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုနိုင်ကြသည်။ သူတို့ကအင်္ဂါ-တိကျတဲ့ဆယ်လူလာအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ် organelles ထံမှထုတ်ယူနေကြသည်။ သင့်ရဲ့ဆဲလ်အဘို့ '' အပိုပစ္စည်း '' အဖြစ်သူတို့ထဲကစဉ်းစားပါ။ သူတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပျက်စီးနေသောဆဲလ်၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ဆယ်လူလာပြုပြင်မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများသည်။
များသောအားဖြင့်အဖြစ်အစောပိုင်း3ရက်သတ္တပတ်အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုအဖြစ် local / ဧရိယာအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်။ ပြည်တွင်းရေးအသုံးပြုမှုများအတွက်, များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်တစ်လအကြာတွင်။
အဆိုပါသက်ရောက်မှုများသောအားဖြင့်6လမှတွေအကြောင်း2နှစ်အရွယ်ရှိ။ ဒီသင်တန်းကိုတစ်ဦးခန့်မှန်းသည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးဆဲလ်ပြုပြင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဆဲလ်တွေကျန်းမာကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သူတို့ရဲ့ဆယ်လူလာသက်တမ်းပြန်၏။ ထို့ကြောင့်ဆဲလ်များ၏အချိန်မတန်မီသေခြင်းတရားသံသရာရပ်ဆိုင်းလျက်ရှိသည်။ ကြောင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ homeostatic ချိန်ခွင်လျှာပွနျလညျထူထောငျကွသညျ။
လတ်ဆတ်အေးခဲအရေးပါသောဆဲလ် (FFVC) ကဘာလဲ?
ဤသည်မြင့်မားသောဇီဝလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလတ်ဆတ်သော, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဆဲလ်များကိုအသုံးပြုသည့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို-တိကျတဲ့ဆဲလ်ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်တွေနက်ရှိုင်း-အေးစက်နေတဲ့အရည်နိုက်ထရိုဂျင်အတွက် -196 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအားလုံးတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင် lysed ဆဲလ်ထိုကဲ့သို့သောအမြှေးပါးအပိုင်းအစများ, တွေ့နေကျမဟုတ်သောအများနှင့်အရေးပါအဖြစ်ပျော်နေပါစေဖယ်ရှားပစ်ရန် centrifuged နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုကြာရှည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲပြင်ဆင်ထားသည်နှင့်ဥရောပရဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာ။
တစ်ခုချင်းစီကိုကုသမှု individualized နှင့်အပြည့်အဝသွေးစစ်ဆေးသမားတို့ကအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။